Ukunyuka kwentengo kagesi kuzothinta abaningi – Bayede News
KWAKUYINJABULO ukungena kukagesi kwaboHlanga ababengenawo ngesikhathi
Posted on 17/01/2019 24/01/2019 by Bayede-News
KWAKUYINJABULO ukungena kukagesi kwaboHlanga ababengenawo ngesikhathi kuqala uHulumeni wedomokhrasi kuboanala uzogcina usuyisiqalekiso. Kusukela ngonyaka we-1994 lapho iNingizimu Afrika yathola inkululeko, imizi yaboHlanga engaphezu kwezigidi ezili-12 isinogesi. Ukunyuka kwamanani kagesi minyaka yonke kuhlukumeza kakhulu aboHlanga abasadonsa kanzima. Inkampani ehlinzeka ngogesi eNingizimu Afrika u-Eskom ifisa ukwenyusa amanani kagesi ngama-15% kulo nyaka nangeminye elandelayo.
NgoMsombuluko isikhulu esiphezulu sakwa-Eskom uMnu uPhakamani Hadebe ubethula enhlanganweni eyengamele ukunyuka kwamanani kagesi eNingizimu Afrika iNational Energy Regulator of South Africa (Nersa), ukuthi noma anganyuswa ngama-15% amanani kagesi iminyaka emithathu ilandelana kodwa akwanele ekutheni baphume ezikweletini. Inkulumo kaHadebe ishiya umbuzo wokuthi ngabe u-Eskom uzimisele ukukhokha izikweletu zawo ngomphakathi yini?
UHadebe utshele ibhodi ukuthi njengoba uHulumeni kunguye umnikazi wenkampani kumele angenelele anabe ngokuthi noma bangasekwa nguHulumeni kodwa kunzima ukutsheleka le mali abayidingayo. “Masiqhubeka nokuthola ithuba lokuthi siqhubeke ngokusebenza okwejwayelekile sizoba senkingeni enkulu,” kusho uHadebe.
Inani lesikweletu siyaqhubeka ngokwanda okwamanje sisami ezigidigidini ezingama-R419. Noma ngabe bayavunyelwa ukunyusa amanani kagesi ngama-15% eminyaka emithathu njalo ngonyaka u-Eskom usazoba nesikweletu sezigidigidi ezingama-R50.
Uthi izakhamuzi zaseNingizimu Afrika kumele ziyibambe ishisa injalo, “Izakhamuzi kanye no- Eskom kumele uzamukele lezi zinqumo ezinzima.”
Khona kunjalo uNersa ufuna izimpendulo kwa-Eskom ukuthi yiziphi izinyathelo kanye nezinhlelo zokulwna nenkohlakalo nokungaphathi ngendlela efanele. Omele iNersa uNks uNomfundo Maseti uthi: “Kunezinhlangano eziqokiwe ukuthi zibhekane nophenyo kodwa amanye amacala awaphothuliwe, kanti kufikile kithina ukuthi kunenani eliphezudlwana elingaxazululiwe.”
Inhlangano engenzi nzuzo eyasungulelwa ukulwa nenkohlakalo i-Organisation Undoing Tax Abuse (Outa) kanye neSouthern African Faith Communities Environment Institute (SAFCEI) bathi akusiwo umqondo ophusile ukuba kuvunyelwe u-Eskom wenyuse amanani ngoba le nkampani izophinda yenze amaphutha afanayo.
UHadebe uthe ubone kusemqoka ukuthi azise umphakathi waseNingizimu Afrika ngezingqinamba ababhekene nazo ngodaba lwezezimali.
Obemele inhlangano i-Outa uMnu uRonald Chauke uthi indlela u-Eskom osebenza ngayo awuyisebenzeli, kanti omele iSAFCEI uNkk uLiz McDaid uthi izakhamuzi zaseNingizimu Afrika zehlise ukusebenzisa kwazo ugesi ngoba azikwazi ukuwukhokhela.
UNkk uMangalisile Ntsele oseneminyaka engama-90 ohlala eMgungundlovu eMbali ophila ngesibonelelo sikaHulumeni uphila ngokufaka umshini khona uzolekelela amaphaphu akhe, ukhala ngokuthi akazi izokhokhwa ngubani le mali abafuna ukuyinyusa bebe bevele behluleka ukukhokha. “Selokhu kwathiwa esibhedlela e-Edendale kumele ngithenge lo mshini, imali kagesi isinyuke kakhulu ngoba lo mshini isikhathi esiningi uhlezi usebenza. Kodwa-ke bengivele ngihluleka ukukhokha ngoba ububiza vele uma kuqhathaniswa nemali engiyitholayo,” kusho uNkk Ntsele.
“Ngalokhu kukhula kwamanani okuqhubekayo sicabanga ukuthi ukuthi u-Eskom usuvele uhlulekile. Lokhu esikubonayo kungumgodi ozothatha imali uphinde uhudulele izwe phansi,” kusho uNkk McDaid.
Entendeni yentungo kagesi
Ugesi uhlukene izigaba ezintathu esoku-1 ilapho uphehlwa khona, esesi-2 ilapho uhanjiswa khona ngezintambo ziya ezikhungweni ezigcina amandla (power stations), esesi-3 ilapho ungeniswa khona ezindlini nasezimbonini ezahlukahlukene.
Ukukhula komnotho wezwe kuhambisana nezimboni, kanti nokukhula kwezimboni kuhambisana nokusizwa ngamandla kagesi ekutheni kube khona izimboni ezizoqhubeka nokusebenza futhi zikhiqize.
Esikhathini esedlule ugesi ubutholakala kalula eNingizimu Afrika, okusho ukuthi beyinamandla okuqhubeka yenze kahle, obekunikeza izwe ithuba lokuthi liqhubeke ngokuba namandla kagesi nobekunikeza izwe amandla okuthi liqhubeke nokwakha izimboni eziningi ukuze zikwazi ukukhulisa umnotho.
Ukuhluleka ukuhlela kukaHulumeni ngesikhathi kusaphethe owayenguMengameli uMnu uThabo Mbeki bamxwayisa isikhathi eside ukuthi kuzohamba kube nenkinga kagesi eNingizimu Afrika. UMbeki wabuya waxolisa ukuthi abakwenzanga okwakufanele bakwenze. Ukuhluleka ukuhlela okuholelele ekutheni iNingizimu Afrika inyukelwe ngamanani kagesi kakhulu ngokungafanele ngoba ukube babehlele ngendlela eyiyo ngabe isimo asinjena.
INersa njengoba kuyiyona nhlangano eyengamele ukwenyuswa nokulawulwa kwamanani kagesi eNingizimu Afrika, njalo ngonyaka u-Eskom ufaka isicelo kuNersa ukuthi ugunyaze ukunyuka ngamanani athile ugesi khona bezokwazi ukwenza inzuzo bese ngaleyo nzuzo bakwazi ukubuyisa imali emnothweni khona bezokwakha iziphehlamandla ezintsha. Kusuka ngonyaka wezi-2008 ugesi usunyuke ngama-356%.
Abantu abashayeka kakhulu ekunyukeni kukagesi ngabantu abahlala ezindlini kakhulu kunezimboni. Iqiniso ukuthi izimboni izona ezidla ugesi omkhulu okudlula abantu abahlala ezindlini kodwa ugesi unyuselwa kakhulu abantu abahlala ezindlini. Ngoba kumele kutatshwe imali kubona. Ukunyuka kwamanani kagesi kunomthelela ongemuhle emnothweni ngoba osozimboni uma befika ezweni bayabheka ukuthi ugesi uzobiza imali engakanani. Osozimboni babhekelela ukuthi abazosebenzela yini ugesi ngoba yizimboni zabo ezidla ugesi kakhulu.
Udaba lwama-Independent Power Producers (IPP) angumfakela kuHulumeni ekuzameni ukuthi ama- IPP asebenzisa uhlelo olunganukubezi imvelo (green economy). Njengamanje ama- IPP awuzukuba nomthelela omuhle kakhulu ekwehliseni izinga lokunyuka kwamanani kagesi ngoba laba abazofakela ama-IPP okungamaSolar, Wind Power bafuna ukwenza inzuzo nabo, ngalokho okusho ukuthi kufanele kubize kakhulu ugesi ukuze kwenziwe inzuzo. Ngoba ukukhiqiza inani elithile likagesi kubiza imali engaphezulu kwaleyo abazowudayisa ngawo. Uma into ibiza ngephezu kwemali ezoyidayisa ngayo kusho ukuthi wena mdayisi uyalahlekelwa.
UMengameli uMnu uCyril Ramaphosa uthi iNingizimu Afrika izothumela umyalezo onamandla emazweni aphesheya ukuthi uHulumeni ubambisene namabhizinisi kanye nemiphakathi ngenxa yokuzama ukuqinisa nokukhulisa umnotho wezwe. UMengameli usho lokhu ngenkathi ehlangene ne-Eskom Sustainability Task Team emzini wakhe ePitoli ngolwesithathu.
Uthi uHulumeni ubhekene nodaba lakwa-Eskom nazo zonke ezinye izikhungo zikaHulumeni okubalwa kuzo neSouth African Revenue Service (SARS) kanye neNational Prosecuting Authority (NPA).
“Lo mlayezo omuhle singawusabalalisa umhlaba wonke babone njengezakhamuzi zaseNingizimu Afrika enye yezinto esinamandla nesikwazi ukuyenza ngukusebenza ngokubambisana ukuze sinqobe izingqinamba esibhekene nazo,” kusho uRamaphosa.
Konke lokhu kuncike ekutheni okunye kugxile kuyiphi ingxenye yentungo kagesi. UHulumeni yena ubheka zonke izingxenye zentungo kagesi ngoba kuthinta umnotho wezwe ngandlela thizeni.
Posted in Injolozela